Isitoreji Segesi Esilwelwesi
Yimiphi imingcele yokuklama edingekayo kumaphrojekthi we-biogas?
Lapho kuklanywa iphrojekthi ye-biogas, kunamapharamitha amaningi okufanele abe neqiniso, okubandakanya isikali sephrojekthi, ivolumu yokwelashwa nevolumu yomkhiqizo okuzokwakhiwa ngokuzayo. 1. Inani lendle (inani lezinto zokusetshenziswa). Uma kungewona umquba wepulazi osetshenzisiwe, ubuningi kanye ...Funda kabanzi »
I-Upflow Anaerobic Sludge Bed Reactor (UASB)
upflow anaerobic sludge bed reactor (UASB) I-UASB ingenye yezingqimba ezikhula ngesivinini esikhulu, esibonakala ngokugeleza okuphansi kuya phezulu kwendle ngombhede onwetshiwe we-granular sludge bed. I-digester ihlukaniswe izingxenye ezintathu, okungukuthi umbhede wamadaka, ungqimba lwedaka nesihlukanisi sesigaba ezintathu. ISepara ...Funda kabanzi »
Ithangi le-GFS selidumile emhlabeni wonke
Isikhathi Iposi: Jun-29-2021
Ithangi le-GFS lisetshenzisiwe kuphrojekthi yokukhucululwa kwendle yezitshalo zemithi
Ukusetshenziswa kweBiogas Project eBreeding Farm
Isikhathi Iposi: Jun-19-2021
Eminyakeni yakamuva, amaphrojekthi we-biogas amakhulu naphakathi abe yisikhungo sobunjiniyela esisemqoka ekwelapheni amanzi angcolile angcolile, udoti, ukwelashwa kwemvelo kanye nezolimo zemvelo. Inkampani yethu igxile ocwaningweni nasekuthuthukisweni nasekukhiqizeni ...Funda kabanzi »
Kungani ukhetha i-Glass-Fused-To-Steel-tank
Ithangi le-Glass-Fused-To-Steel lihlanganiswe kusuka kumacwecwe wensimbi akhethekile, izinto ezikhethekile zokufaka uphawu, amabhawodi wokuzivala nezinye izinto. Ingasetshenziselwa ukugcinwa okuvaliwe kwamagesi, uketshezi nokuqina kubunjiniyela be-biogas, ukwelashwa kwendle, ukugcina okusanhlamvu, izimboni zepetrochemical nokunye ...Funda kabanzi »
Amandla we-Biomass nakanjani azokwenza izinto ezinhle
Amandla e-bio-mass ekuthuthukiseni izwe lethu ukungaqondi kahle kunokuqonda, ubunzima obuningi kunokusekelwa, kodwa ngenxa yobuhle bakhe bemvelo, futhi ekugcineni usuku nosuku ukukhula nokukhula. Ekupheleni konyaka we-2016, i-biomass yakhiqiza ugesi wama-kilowatt-amahora angu-63.4 billion ezweni lonke, ...Funda kabanzi »
Ukwelashwa kwamanzi amdaka eShanghai
4 Ingilazi ehlanganiswe namathangi ensimbi aboshiwe yakhiwe eShanghai, izosetshenziselwa ukwelashwa kwamanzi angcolile. xhumana: Jane@bsltank.com mob: +8615373670441Funda kabanzi »
Ukwelashwa amanzi XuZhou imfucuza
Ingilazi ifakwe ku-steel bolted tank 8.4m Dia. I-21m H. UASB isiqediwe eXuzhou City, China Imininingwane: jane@bsltank.com mob: +8615373670441Funda kabanzi »
Ithangi lamanzi laseJapan selizophela
Iphrojekthi yethu eJapan manje isizophela. Ethintwe yilo bhubhane, ukuthuthuka kwezomnotho namasiko kuzo zonke izingxenye zomhlaba kuvinjelwe ngezinga elithile. Kepha ngokwanda kwemithi yokugoma eChina kanye nokwesekwa okuqinile kukahulumeni, iChina iqale kabusha umsebenzi wansuku zonke ...Funda kabanzi »
Ukukhula Kwemakethe Yezitshalo zeBiogas, Amathrendi, Umthelela we-COVID-19 ne-Forecast (2021
INetherlands-I-Dutch City Council ngoLwesithathu ivume inkontileka yokwakha yokwakha i-anaerobic digester esikhungweni sokuhlanza amanzi angcolile soMkhandlu Wezemisebenzi Yomphakathi waseDashi. I-digester izobola ukudla okuqinile okusele ngemuva kwenqubo yokwelashwa kwamanzi angcolile, i-reduci ...Funda kabanzi »
Isingeniso ku-CSTR Tank Nokuqedwa Kokufakwa Kwephrojekthi
IShijiazhuang Zhaoyang Biogas Equipment Co., Ltd ihambise ngempumelelo amathangi amabili woqweqwe lwe-CSTR (amathangi wokugcina / amathangi womhlangano ahlanganisiwe) akhiwe eLongyou City, eSifundazweni saseZhejiang, anamandla angama-cubic metres angama-637. ..Funda kabanzi »
Yimiphi imingcele yokuklama edingekayo ku-b ...
Lapho kuklanywa iphrojekthi ye-biogas, kunamapharamitha amaningi okufanele abe neqiniso, okubandakanya isikali sephrojekthi, ivolumu yokwelashwa nevolumu yomkhiqizo okuzokwakhiwa ngokuzayo. 1. Inani lendle (amoun ...
upflow anaerobic sludge bed reactor (UASB) I-UASB ingenye yezingqimba ezikhula ngesivinini esikhulu, esibonakala ngokugeleza okuphansi kuya phezulu kwendle ngombhede onwetshiwe we-granular sludge bed. I-digester ihlukaniswe yaba yi-th ...
Ithangi le-GFS lisetshenzisiwe kuhlelo lwezemithi ...
Ukusetshenziswa kwephrojekthi ye-Biogas ekuzaleni ...
Eminyakeni yamuva nje, amaphrojekthi we-biogas amakhulu naphakathi abe yisikhungo sobunjiniyela esibalulekile ekwelapheni amanzi angcolile angcolile, imfucuza, ukwelashwa kwemvelo kanye ne-agricul yemvelo ...
Ikheli: Igumbi 1010, Isakhiwo seBaichuan, iJianhua North Road, isifunda saseChang'an, idolobha laseShijiazhuang, eHebei, eChina
UMnu Rader --- ( jack.lu@zytank.cn ) 0086-18132648364
UMnu Henry --- ( boselan003@zytank.cn ) 0086-13012161176
UNks Clean --- ( jane@bsltank.com ) 0086-15373670441
UMnu Eddy --- ( eddykeo@163.com ) 0086-15130175690